देशको माया | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← संविधानका विवादित विषयमा आजदेखि छलफल
झापाली समाज कुवेतले कार्यक्रमको हिसाब सार्वजनिक गर्‍यो, जम्मा १२३९ केडी फाईदा →
Posted on 28/09/2014 by शिव पौडेल | टिप्पणी छोड्नुहोस्
‘राष्ट्रियता खतरामा परेको’ भन्ने बहस अहिले चर्चामा छ । राजनीति अप्ठेरोमा परेका बेला यो विषयले मानिसहरुको ध्यान सजिलै तान्छ भन्ने नेताहरुलाई थाहा हुन्छ । त्यसैले ‘चलाख’ नेताहरु अप्ठेरो पर्दा ‘राष्ट्रियता’को तुरुप फाल्छन । र यो विषयले जोशिलो रगत भएका तन्नेरीहरु अलि बढि भावुक र देशप्रेमको भावनामा छोपिन्छन पनि । राजनीति जटिल मोडबाट गुज्रिएको बेला, अर्थतन्त्र, सुरक्षा, पूर्वाधर निर्माण लागयताका विषय जस्तै देशको अस्तित्व अर्थात राष्ट्रियताको सवाल पनि स्वभावैले अप्ठेरोमा हुन्छ । तर ‘खतरामा परेको राष्ट्रियता’ जोगाउने बहानामा गरिने वा चलाईने गतिविधिले यो देशलाई मजवुद बनाउँछ कि अन्य कुराहरुको विकास र विस्तारले ? मलाई लाग्छ अवसरहरुको सिर्जना, व्यक्तिको क्षमता विकास र प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने वातावरणको विस्तारले जब नागरिक आफैमा सवल हुन्छ, तब अन्य कुरासंगै देशको अस्तित्व पनि बलियो र दिगो हुन्छ ।
यो देशलाई माया गर्ने कुरा थाल्दा मलाई मेरै गाउँको संझनाले अंगाल्छ ।
पञ्चायत व्यवस्थाको अन्ततिर कछारको गाउँमा मैले पढ्ने स्कुलकोछानामा धुरी थिएन। कक्षामा उज्यालो दिनमा घाम छिर्थ्यो र झरी परेको दिन पानी। हावा हुरी आयो भने हामी असाध्यै खुसी हुन्थ्यौं ।त्यस्तो दिन पढ्न पर्दैनथ्यो । धुरीबाट छिर्ने पानीको बाछिटाले कोठा पुरै भिज्थ्यो, अनि कक्षा छुट्टि ।
गोरखा सदरमुकामबाट झन्डै १५ कोष टाढा, दक्षिण पूर्व,बुढी गण्डकी र त्रिशुली नदिको खोँचमा पर्ने त्यो गाउँमापञ्चायतको राजनीति गर्नेहरुको ध्यान जाँदैनथ्यो । त्यसैले कम्युनिष्ट गतिविधि सक्रिय थियो ।कछारको गाउँ, कम्युनिष्ट राजनीति गर्नेहरुको अखडा भएपछि पूर्वाधार बिकास हुने कुरै भएन । बुढापाकाहरु भन्थे,‘राजाको जगजगीमा कम्युनिष्टले राज गर्न खोजेको गाउँमा के विकास हुनु ?’
गाउँमा केही थिएन भन्दा पनि हुन्छ । त्रिशुली पारी पृथ्वीराजमार्ग जोड्न झोलुङगे पुल थिएन । पारि सडकमा उज्यालो बल्थ्यो, वारी अंधकार । स्वास्थ्य चौकी परैको कुरा भयो । स्कूल नाममात्रको थियो । झरी हुरी पर्दा पानी चुहिएर बन्द गर्नुपर्ने । सायद देशैभरिका गाउँहरुको अवस्था यस्तै थियो त्यसबेला ।
तर ती दिनहरुमा स्कुलमा पढ्दा, अहिले पनि मलाई संझना छ; सरहरुले ‘हरियो बन नेपालको धन’ भन्दै बन सम्पदाको खुब बखान घोक्न लाउँथे। देश सानो भए पनि प्रकृतिले अपार सुन्दारता दिएको कुरा सिकाईन्थ्यो। किताबहरुमा त्यस्तै लेखिएको हुन्थ्यो। महाकवि देवकोटाको निबन्ध ‘के नेपाल सानो छ?’पढ्न त पर्दैनथ्यो तर ठ्याक्कै त्यही हिसावको भाव घोकाईन्थ्यो। त्यसबेला लाग्थ्यो अहो ! संसारमा मेरो देश जस्तो सुन्दर र राम्रो कसैको देश पनि छैन । अरु देशका ’boutमा केही पनि जानकारी थिएन । तैपनि यो सानो देशको खुब माया लागेर आउँथ्यो। भला गाउँको गरिवी आंखै अघि किन नहोस ।
अहिले सोच्छु यो देशलाई माया मात्रै गरिरहनु पर्ने कारण के छ?
मेरा तर्कहरुमा तपाई निरासा पाउनुहोला । तर आज संसारका अरु ठाउँहरुसंग तुलना गरेर हेर्दा देशलाई माया मात्रै गर्नु पर्नाको अर्थखासै देखिन मैले । राज्यलाई कर तिर्ने नागरिकको हिसाबले प्रत्येकको केही दायित्व हुन्छ – देशको कानून अनुसार कर तिर्नु र कानूनको पालना गर्नु । तर राज्य सञ्चालनको निकयमा पुगेका र बसेकाहरुको झन धैरै जिम्मेवारी हुनु पर्छ– कानून कार्यान्वयन गर्न, थिती बसाउन र सरकार र सरकारी संयन्त्रलाई ‘राज्य’ जस्तो बनाउन । त्यस्ता अनगिनत ठाऊँहरु छन, यो देशले ‘देश’जस्तो ब्यबहार गर्न सुधार्नु पर्ने र राज्य ‘राज्य’ जस्तो हुन पुरा गर्नु पर्ने ।
रोजगारीको झिनो संभावना पनि देशभित्र नभएपछि अरब गएकाहरुले आयोजना गरेको भानु जयन्तीमा पुगेका कवि श्रवण मुकारुङ लेख्छन:
यो देशले के दियो र तिमीहरुलाई
यति धेरै तिमीहरु देशको माया गर्छौ?
यही देशले खाली खुट्टा लखेटेको होईन तिमीहरुलाई
यही देशले नाङगेझार घोक्र्याएको होईन तिमीहरुलाई
तैपनि किन तिंमीहरु नेपाल भन्नासाथ छातीमा हात राख्छौ, शीर झुकाउँछौ
आँखाभरि टलपल आँसु उमार्छौ?
राष्ट्रबादी बन्ने नाममा जन्मेको माटोलाई माया गर्नु पर्छ भन्ने हो भने भन्नका लागि गरिने मायाको सार नै के भो र?हैन व्यवहारिक बनेर हेर्ने हो भने व्यापार र बजारले मानव उन्नतिको सिमा निर्क्यौल गर्ने आजको विश्वमा जहाँ सुबिधा, फाइदा र नाफाको जीन्दगी बिताउन सकिन्छ, मान्छेपाएसम्म र सकेसम्म त्यहीं जान्छन । यस्तोबेला लाग्छ कहाँ छ त मया गर्न मन लाग्ने चीज यो ठाउँमा? कुन चीजको माया मानेर बसुँ यो देशमा ?
मलाई लाग्छ, माया गर्नै पर्ने चिज- पहाडको चीसो पानी, नीर्मल हावा र अबोध किसानहरुको सरल जीबन बाहेक बाँकी निकै कम छन,यो देशमा । बाँकी कसलाई माया गर्ने? राज्यलाई? शासनलाई?वा शासन गर्नेलाई ? यो प्रश्नले मेरो मथिंगल रिंगाउँछ ।
मेरो पुस्ताको तन्नेरी, जसलाईआर्थिक उन्नती गरिरहेका दुई छिमेकी देशका तन्नेरीहरुजस्तै उन्नती गर्ने मोह र जोश छ ।‘नेपालको राष्ट्रियता खतरामा छ’ जस्ता राजनीतिक नाराका भरमा उनीहरु देशप्रेमी बन्न अब सक्दैनन । पढेलेखेका तन्नेरीहरु यूरोप अमेरिका पुगेका छन, अबसर नपाएका वा कम पढेका मलेसिया, कतार र कोरियामा । देशभित्र बाँकी रहेकाहरु पनि केही सर्तमा मात्र ‘देशको सेवा’ मा हुनेछन ।देशभित्रै रोजगारी, शान्ति – रोजगारी, खुलारुपमा आर्थिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण,सुरक्षा, बैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्ता सर्तहरुलेनिर्धारण गर्नेछ अवका युवाहरुको ‘देश प्रेम’ । र त्यसैले कोर्नेछ प्रगतिको रेखा – युवाहरुको र देशको । त्यसो हुन सकेन भने जहाँ अवसर प्राप्त हुन्छ‘सक्षम तन्नेरी’हरु त्यहीं जानेछन, गईरहेका छन । ‘ब्रेन ड्रेन’ को समस्याले यो देशलाई झन उजाड बनाउने छ।
त्यसोभए के नेपाल सबैलाई प्यारो छ त?यो देशलाई मनैदेखि माया गर्ने को छ?
श्रम विभागका अनुसार, गत वर्षसाउन महिनामा मात्रैदैनिक एक हजार चारसयका दरले युवा कामका लागि विदेसिए । भारत बाहेक र युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया पढ्न भनेर गएकालाई नगन्दा पनि सरकारी रेकर्डमा नाम लेखाएर कामका लागि विदेशिएका तन्नेरीहरुको संख्या चालिस लाख नाघिसक्यो। त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्ने जुनसुकै प्लेनमा आधा भन्दा धेरै रोजगारीका लागि उडेकाहरु हुन्छन। के उनीहरु देशको माया मानेरै उडेका होलान? कि यो देशको माया नलागेर उडेका? यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्दा म आफ्नै तस्विर आफू अघि पाउँछु।
यो लेखको सुरु प्रति लेख्दै गर्दा म बाबु बन्न प्रतिक्षारत एक युवा थिएं । मेरी श्रीमतीको गर्भमा ६ महिनाको बच्चा थियो ।उ तीन महिनापछि यो संसारमा पाईला टेक्नेछ भन्ने कल्पना मात्रैले पनि म रोमाञ्चित भैरहेको हुन्थें । तीनमहिना पछि मेरी छोरीले पनि मैले जस्तै तछाँड मछाड गर्ने छ र सालाखाला एउटा नेपालीको जीवन बिताएर उमेर कटाउने छ उसले, म यस्तै कल्पनामा हुन्थें ।
तरकारी र अरु दैनिक सामान किनमेलका लागि पाटनढोक आसपास सडकमा साँझको घुम्ती पसल जाँदा मानिसहरु परसम्म आँखा घुमाएर हामीलाई हेर्थे । चिनेजानेकाहरु त सोधी पनि हाल्थे,’कतिको भयो बच्चा?’
‘६ महिनाको’ पावना जवाफ फर्काउँथिन । पेटभित्रैको पनि हामी दिन गन्दै थियौं । दिनदिनै बाक्लिंदै गरेको पेटलले उसलाई हिंड्न झन झन कठिन बनाऊँदै थियो ।
‘छोरा कि छोरी?’ धेरैले सोध्थे ।
‘जुन दिन बच्चा धर्तीमा पैदा होला, त्यहीबेला थाहा लाग्ला उसको लिङग।’ हाम्रो जवाफले मानिसहरु खिस्स हुन्थे ।
हामी अमेरिकाबाट फर्केको पनि ६ महिना भएको थियो । चिनेकाहरु भेट हुँदा प्रसंग उठाईहाल्थे’किन फर्केको अमेरिकाबाट? एउटा बच्चा त अमेरिकामै प्लान गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ अधिकाँशको सुझाव हुन्थ्यो ।
खासमा अहिलेसम्म मैले एकजना पनि भेटेको छैन ‘नेपाल आएर राम्रो गरिस्’ भन्ने। हामीलाई अलि नजिकबाट चिनेकामध्ये एक दुई बाहेक बाँकी कसैले पनि नेपालमै बच्चा जन्माउने हाम्रो योजनालाई राम्रो भनेनन्। अनि सोच्छु के दिएको छ बिदेशले? किन मानिसहरु मरिहत्ते गर्छन उतै जान? उतै बच्चा जन्माउन? अनि के दिन सकेको छैन नेपालले? कवि मीन बहादुर विष्टको कविता संझना हुन्छ यस्तो बेला:
जसको कुनै लेखकले एउटा निवन्ध लेख्न सकोस
बातैपिच्छे भन्ने गर्छन लाहुरेहरु
खोजीपस्ने हो भने नेपालका उच्च पदस्थ र प्रभावशालि नेता वा पूर्व मन्त्रिमध्ये धेरैको छोरा छोरी वा नाती नातिना अमेरिका, यूरोप वा अष्ट्रेलियामा छन। ’em नेपाल फर्कन्नन्, उतै बस्छन। यस्तोबेला लाग्छ यदि नेपाल ‘राम्रो’ भैदिएको भए ’em पनि नेपालै फर्कन्थे होलान कि? ‘राम्रो’ को मेरो अर्थ सहज जीवन विताउने अबसर अरु परिवेशहरु । आफ्ना छोरा छोरी याहाँ नबस्ने भएपछि नीति बनाउने नेता र उच्च पदस्थ अधिकारीलाई पनि यो ठाउँ राम्रो या अनुसासित बनाईरहन परेन। ‘यो देश भर्सेलै परे नि मलाई के हुन्छ र, टाउको लुकाउने ठाम बिदेशमा छँदैछ’ भन्ने नेता र उच्च सरकारी अधिकारीको सोचाई नै अविकासको एउटा कारण त हैन? ’emका छोरा छोरी यही ठाउँमा हुने हो भने नेताहरुलाई पनि आफ्नै सन्तानको भविष्यले कुनै न कुनै बेला पिरोल्ने थियो र सायद केही असल काम गर्न प्रेरित हुने थिए ।
यथार्थ भन्नु पर्दामिन बहादुर विष्टको कविता जस्तै हो। पहाडमा उराठलाग्दो सालको ठूटो बाहेक अरु चिज कमै छ। शहर बेथिति र भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको छ। अनि सोच्छु नेपालमै सन्तान जन्माउने निर्णय गरेर हामीले गल्ती त गरेनौं?
तत्कालका लागि मसंग जवाफ छैन। मेरो छोरीलाई दिने जवाफ भविष्यमा पनि मसंग नहुन सक्छ। विदेशका अवसरहरुलाई छोडेर नेपालै बस्ने निर्णय गर्दा साह्रै ठूलो देशभक्ति देखाएको छु -मैले त्यो भन्ने खोजेको हैन। मलाई नेपाली भाषा वोल्ने माटोमा काम गर्न सजिलो भयो, यहींको कुरा गर्न सर पर्‍यो । लाग्यो केही गर्ने हो भने यहीं नै गर्न सक्छु, अन्त हैन। त्यसैले म यहाँ बसें। तर अरुलाई यहाँ भन्दा अरु ठाउँमा कमाउन सकिने, केही गर्न सकिने आश होला। त्यस्ता युवाहरु ताक परे कुनै दिन उतै जानेछन। देशमा थिति बस्न सके, आर्थिक उन्नतीको बाटो हिंड्न सके; मेरो र भावि पुस्ता यहीं रहला ।प्रगतिको बाटो हिंड्दै जाँदा यो माटोप्रति गर्व गर्ने दिन पनि आउला ।नत्र राष्ट्रबादको भावनामा‘देशको माया गर्नुपर्छ’ भन्ने खोक्रो नारामा मात्र रमाएर तन्नेरीहरु यो ठाउँमा रहलान जस्तो म ठान्दिन।
यो देश ‘अपार सुन्दरता र संभावनाले भरिएको’ भन्ने नेताहरुका बोलीमा मलाई संका छ । केही छ यो देशमा भने जलश्रोत, युवा शक्ति र पर्यटन – वस त्यती छन् ।
ब्यक्ति आफै केही हुन सकेन भने देशको माया मानेर मात्र केही हुन्न । जबसम्म देश आर्थिक सम्पन्नताको बाटोमा हुन्न, सुन्दरता र संभाव्यता भन्ने चिज ढोंग सिवाय केही हुन्न । व्यक्तिले प्रगति गर्न सके देशको उन्नती हुने हो । तब न पहाड, खोला, बन सुन्दर हुनेहुन्; नत्र ती चिजहरुको केही अर्थ छैन। यो भूगोल र सुन्दरताको पनि कुनै अर्थ हुन्न। देशले आर्थिक प्रगति नगरुन्जेल ‘देशको माया’ देखाउनका लागि गरिने ढोंग मात्र हुनेछ ।
– See more at: http://setoparewa.com/2014/09/27/9654#sthash.3HeTu1NJ.dpuf